Sahara Andrefana: Nomena Aina Amin’ny Fiteny Castillan Ny Tononkalo Sahraouie · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Constance BRIAND
Voadika ny 25 Desambra 2018 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: navoaka tamin'ny Jolay 2008 ity lahatsoratra ity)
Ho an'ireo kolontsaina sasantsasany, ny sakafo, ho an'ny hafa kosa, ny mozika, ary marobe ireo kolontsaina manamafy ny amantarana azy amin'ny alalan'ny taotrano. Anisany iray amin'ireo toetra manokana ara-kolotoraly ho an'i Sahara Andrefana, ny lovantsofina, ary ny tononkalo no manana lanjany betsaka indrindra eo anatrehan'ireo Sahraouis [teny espanola]. Manana lanjany goavana ao anatin'ny fiainan'izy ireo io literatiora io amin'izao fotoana izao. Araka ny voalazan'ny Atrapadordesueños [teny espanola] :
Raha anontanianao kisendrasendra ny Sahraoui iray mikasika ny tononkalo, ny zavatra azo antoka, tsy ho azony an-tsaina na ny lohatenin'ny lahatsoratra, na ny lohatenin'ny tononkalo. Na izany aza, tena azo inoana fa ho vitany tanisaina ny anaran'ireo poeta tena malaza indrindra, ary mety hitanisa andalana maromaro ayv amin'ny tsiarony aza izy . Izao no fanazavana izany: mbola ambava foana amin'ny teny hassania, tenin'ireo Sahraouis, ny tononkalo sahraoui nentim-paharazana, na dia tato anatin'ireo taona maro farany aza, nandramana ny nanoratra azy sy nitahiry an'ireo soratra mba hialàna amin'ilay hoe indray andro any izy hanjavona miaraka amin'ireo mpanoratra azy. Nandritra ny fanjanahan'ny espaniola, nahilikilika ny tononkalo. Tsy nisy niraharaha ny tononkalo, na nisahirana tamin'ny kolontsaina sahraouie tamin'ny ankapobeny. Voaaro tamin'ny fitaoman'ny tety ivelany, nanohy ny diany tamin'ny fitondrana irery ny fiarany nentim-paharazana ny tononkalo, izany hoe ny “tohon-tsofina”, amin'ny fampidirana ao amin'ny fitadidiana azy io, ireo poeta, ireo mpihira sy ireo mpankafy ny tononkalo.
Indraindray, ny tononkalo dia ampiarahina amin'ny mozika, anatina fombandrazam-pianakaviana, hoy ny fanazavan'ny bilaogera sahraouie iray Aziza Brahim [teny espaniola], izay mpihira malaza. Mamaritra ireo fifandraisany amin'ny renibeny izy, izay poeta vehivavy sahraouie malaza iray, monina ao amin'ny tobin'ireo mpitsoaponenana ao Ljadra Mint Mabruk:
Ho ahy, ny fotoana iray izay tsy hiova mihitsy dia ny fisotroana dité ao amin'ny renibeko Ljadra. Hatramin'ny fahakeliko, betsaka ny fotoana iarahanay mandany. Miady hevitra izahay, mihogo ny volony aho, mifampizara tsiambaratelo, indrindra koa, izy no mba fizaràko ny tsiambarateloko ary izy no loharanon'ny aingam-panahiko. Notovoziko tao anatin'ny tononkalon'ny renibeko ny mozikako, voajanahary izany. Matetika, izaho manomboka mihira, izy manomboka miantsa ny tononkalony, na mifamadika amin'izay.
Mampahafantatra poety sahraouis fito eo amin'ny vohikalany [teny espaniola] i Ariadna izay mampivady teny roa samihafa, ny castillan no teny faharoa tenenina ao amin'ny faritra. Nolavin'ny Institut Cervantes, misahana ny fianarana sy ny fanabeazana ny teny castillane erantany, hatrany ny fanohanana azy ireo, tahaka izay ampahatsiahivin'ny blaogera Haz Lo que Debas [teny espaniola] manao hoe:
Tsy maika ve ny hanampiana zaza iray sahraoui izay maniry ny hianatra ny teny espaniola any ampianarana, izay miatrika sakana marobe, toy izay hamatsy fananganana foibe vaovao ho an'ny Institut Cervantes ao Pékin, Saint-Pétersbourg… na koa ao amin'ny 5ème Avenue an'i New York?
Mihevitra ilay blaogera hoe fanontaniana manan-danja io satria ny literatiora sahraouie dia misy ihany koa amin'ny teny castillan:
Mbola vao mitsaika any am-bohoka ny literatiora sahraouie amin'ny teny castillan, mandroso dingana tsikelikely araka izay azo atao. Media vitsy an'isa no manohana io literatiora iray io ary tsy fantatry ny daholobe. Adinonin'ireo toerana fampianarana espaniola ihany koa izy io, tahaka ny Institut Cervantes na ny Casa Arabe, izay tsy liana amin'ny kolontsain'io vahoaka metisy arabo afrikana io izay miteny ihany koa ny teny espaniola, ary, tany aloha tany, an'i Espaina. Fa noho ny fanampian'ireo mpanoratra, ireo anjerimanontolo ary ireo fikambanana miray hina no ahombiazan'ny vahoaka sahraoui amin'ny fandrodanana an'io rindrina najoro manohitra ny vahoaka mitaky am-pilaminana ny fahafahany io, sady miantso “fandriampahalemana sy fifanakalozankevitra” mba hamerenana ny tany izay nalaina tamin'izy ireo tsy ara-drariny.
Telo taona izao, nivondrona ny tarika poeta sy mpanoratra sahraouis mba hanangana ny Generación de la Amistad Saharaui (Andiantaranak'ireo naman'ny Sahraouis) [teny espaniola].
9 jolay io andro io, andro iray tena nafàna, tao afovoan'i Madrid. andiana sahraouis poety avy amin'ireo toerana samihafa, notohan'ireo espanola mpanoratra sy manampahaizana marobe, no nanomboka ny ady izay nahitàny ny vokany voalohany sady nahazo toky tamin'ny famoahana boky ampolony nanomboka teo. Avy any amin'ireo tobin'ny mpitsoaponenana sahraoui, sakaiza hafa no nanjohy tamin'ny fahaterahan'io “nofinofy feno fanetrentena” io izay , telo taona aty aoriana, mbola tetikasa iray tsotra foana izy nefa tena misy ankehitriny.
Teny ihany koa ny tononkalo. Manohy miresaka ireo Sahraouis mba hitehirizana ny tantaran'izy ireo sy ny kolontsainy noho ny fanorenana ireo tetezana mampitohy ny teny sarahouie sy castillane.
30 Novambra 2018Fifandraisana iraisam-pirenena
26 Novambra 2018Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana